ASA UPVC ophahleni lukathayela ishidi W1025 - China Hubei Shengyu zokwakha
Shengyu UPVC ophahleni lukathayela ishidi, wenziwe uPVC, qeda ecwebezelayo nge ASA resin. It uhlala esitebeleni umbala Izakhiwo ngaphansi ultra-violet ngemisebe, dampness, ukushisa, chillness kanye nomthelela. It is kabanzi e-workshop, agcine, izindlu kanye uphahla ahlukahlukene unomphela ngomlando iminyaka eminingi isicelo emazweni amaningi athuthukile. Shengyu UPVC ophahleni ishidi siyindlela entsha ukuze kwakhiwe ukufulela nodonga ambozwe. Kuyinto ezinzima, eliqinile le ngombala futhi engasindi, tha kangcono ...
Shengyu UPVC ophahleni lukathayela ishidi, wenziwe uPVC, qeda ecwebezelayo nge ASA resin. It uhlala esitebeleni umbala Izakhiwo ngaphansi ultra-violet ngemisebe, dampness, ukushisa, chillness kanye nomthelela. It is kabanzi e-workshop, agcine, izindlu kanye uphahla ahlukahlukene unomphela ngomlando iminyaka eminingi isicelo emazweni amaningi athuthukile.
Shengyu UPVC ophahleni ishidi siyindlela entsha ukuze kwakhiwe ukufulela nodonga ambozwe. Kuyinto ezinzima, eliqinile le ngombala futhi engasindi, ungcono zensimbi ishidi lashukumisa. Okubaluleke nakakhulu, akasoze nokugqwala heavy umkhakha epaki.
1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm 1025mm 940mm 800mm njengoba Kudingeka 3.0-6.0KG / ㎡ ecwebezelayo White, Blue, Gray, ubumba, Red
Previous: ASA resin UPVC ophahleni lukathayela ishidi T980
Okulandelayo: Glass fibre kwagcizelela resin ophahleni ishidi RY720-B